कस्तूरीको अनभिज्ञता | samakalinsahitya.com
प्राय कोरी डोर पार गरेर तीन तला माथि पुग्दा जति बाटोमा कर्मचारी साथीहरू भेट्छु, उति पुलुक्क हेर्दै मुन्टो बटारेर अर्कोतिर तर्किन खोज्छन् । कसै कसैलाई ‘हलो मोर्निङ (शुभप्रभातम्)’ भन्दा पनि फर्केर हेरे जस्तो गर्दै कुनै शब्दोत्तर नदिइ आफ्नो बाटो लाग्छन् । कर्मचारीको यस्तो चिसो भावना हेर्दा त्यहाँको समाजलाई दोस्न मन लाग्छ । यहाँको कति घमन्डी समाज, हामी तेस्रो मुलुकबाट आएकालाई कति हेला ! छेउतिर जाँदा पनि छुइ होला भनी पर सर्ने कस्तो आडम्बरी जात ! साँच्चै यहाँका मान्छेहरू एकोहोरे, मूर्ख हुन्छन् भन्थे, त्यो कुरो साँचो रहेछ ...’ आदि मन भित्र तर्कना गर्दा गर्दै आफ्नो कार्य कक्ष पुग्छु ।